Mayelana NATHI - Maanshan Jo Ee Import & Export Trading Co, Ltd.
Inkampani yami yakha ngo-2008 Kwenziwe ngokomsebenzi, isikhwama se-FIBC, isikhwama esiningi，Isikhwama seJumbo nesikhwama se-PP eselukiwe iminyaka eyi-13.Sisebenzisa ikhwalithi ephezulu ye-petrochemical polypropylene ne-polyethylene njengezinto ezingavuthiwe.Sinezingilazi eziyindilinga eziyiyunithi ezingama-120 futhi sinolayini bokukhiqiza abayi-6 abanebhulashi eliphambili eliphambili, i-PE Coating wire 2 imigqa yokukhiqiza. Inqubo yokukhiqiza enhle kakhulu, inqubo yokukhiqiza eqinile, sizibophezele ekuxazululeni izinkinga ezahlukahlukene zokupakisha kumakhasimende ahlukahlukene.Sithengisa isikhwama esiningi，Isikhwama seJumbo, isikhwama se-FIBC kanye nesikhwama eselukiwe se-Japan, Japan, South Korea, Arabia, Jordan, Brazil, Mexico, Canada, United States nakwamanye amazwe.
Isivinini se-wire wire drawing PE camera
Imikhiqizo kufaka phakathi：
Isiyingi – Lesi sitayela sesikhwama senziwa ku-loom njengebhubhu futhi siyizinga eliphansi kakhulu le-FIBC. Ngeke igcine ukwakheka kwayo lapho ilayishiwe futhi izohlala phansi ivuleke phakathi. Izofana notamatisi lapho ulayishwa, njengoba umkhiqizo uzokwelula indwangu lapho ingaphansi kwengcindezi yomkhiqizo olayishwayo.
U-Iphaneli – Isikhwama se-U-panel siyisinyathelo esinyuka esikhwameni esiyisiyingi, ngoba sizoba nezingcezu ezimbili zendwangu efana nesimo sika-U ethungwe ndawonye ukwenza ukwakheka kwesikhwama. Izogcina ukubukeka kwayo okuyisikwele kangcono kakhulu kunesitayela esiyindilinga.
Amapaneli amane – Isikhwama samaphaneli amane yisikhwama esihle kakhulu sokuhlala isikwele ngaphandle kwesikhwama sokuxaka. Yenziwe ngezingcezu ezine zendwangu ezakha izinhlangothi kanti enye ingezansi. Lokhu konke kuthungelwe ndawonye okuphikisana nokuthambeka kokwelula.
Baffle – Lesi sitayela sizohamba phambili ekugcineni ukwakheka kwekhiyube komkhiqizo wakho lapho isikhwama silayishiwe. Inezindwangu ezengeziwe ezithungwe phansi ekhoneni ngalinye ukuze zisebenze njengephakethe lokugcwalisa ikhona ngalinye. Ngaphezu kwalokho, kunamanye amaphakethe athungwe ohlangothini ngalunye ukuze wonke umkhiqizo uqoqane uzungeze ama-baffles namapokhethi. Lokhu kuphelele uma unomkhiqizo omncane wobubanzi njengobhontshisi ongagudla phakathi kwezingqimba ngaphandle kokulengiswa. Lezi zikhwama ngobuningi zizoba lula ukustaka njengoba zizokwenza i-cube enhle yesikwele.